Ahoana ny fomba filalaovana ny anaram-boninahitra Nintendo amin'ny iPhone Safari nefa tsy misy ny Jailbreak | Vaovao IPhone
Alex Ruiz | | Lalao IPhone, About us
Niresaka momba ny fikasana na tsia an'ny orinasan-dalao horonantsary efa ela izy ireo Nintendo hampifanaraka ny lohatenin'izy ireo amin'ny iOS ary hametraka azy ireo ao amin'ny App Store, mandra-pahatongan'ny kaomandin'ny orinasa nitatitra izany tsy nanana drafitra tahaka izany izy ireo, na dia maro aza ireo mpampiasa erak'izao tontolo izao no manohy maniry izany hetsika izany raha indray andro no niseho.
Saingy tsara vintana ireo mpampiasa ireo androany, satria nisy namorona vavahady web antsoina hoe webNES, izay azo idirana amin'ny alàlan'ny IOS Safari, izay miasa toa NES Rom emulator, mamela ny mpampiasa hampiakatra ireo sary kilalao voatahiry ao amin'ny kaonty Dropbox -n'izy ireo sy izany rehetra izany nefa tsy mila programa fanampiny na mampiasa ny Jailbreak.
Ny mahamety an'io fomba filalaovana lalao Nintendo io dia vita tanteraka avy amin'ny navigateur, ny Roms rehetra dia azo lalaovina am-pahamendrehana na dia indraindray miaina hadalana na fihenam-bidy kely aza. mitondra mampiditra mpandrindra ahazoana aina izay mamela antsika hilalao amin'ny toerana roa mitsivalana toy ny marindrano (na dia mihoatra ny sary aza ny fomba fizahantany). Ny zavatra tsara momba an'io fomba io dia miasa tanteraka avy amin'ny tranokala ary tsy misy fomba hanakatonan'i Apple na Nintendo azy, satria pejy web tsy misy Rom izy io, tsy manitsakitsaka ny lalàna ary ny mpampiasa dia ilay iray izay hanana ny roms Nintendo amin'ny anao kaonty dropbox izay rohy dia ho entin'ny vavahady ary mankafy azy ireo.
Raha hampiasa webNES dia mila mankany ianao webn.es amin'ny alàlan'ny Safari browser anao, hisy lalao maimaim-poana roa hiseho mba hahafahanay mizaha toetra azy, raha vantany vao ao anaty tranonkala isika dia afaka manao tsindrio ny famantarana "+" eo amin'ny zoro havanana ambony hametrahana ny kaonty Dropbox anay. Mila ny kaonty Dropbox izahay hampidirana rom NES teo aloha izay mivezivezy amin'ny tambajotra ary afaka manampy azy webNES. Rehefa avy nanampy ny rom NES dia tsindrio fotsiny ny anaran'ny lalao manomboka milalao.
Ny hany lesoka azontsika apetraka amin'io fomba io dia io hafainganam-pandeha tsy ho tena 100%, dia ny tsy fisian'ny feo satria ny lalao dia alaina tahaka amin'ny alàlan'ny browser. Ity fomba ity dia nosedraina ihany koa ary azo ampiasaina amin'ny browser rehetra, tsy ny Safari ihany, mifanaraka amin'ny Mazava ho azy fa afaka milalao amin'ny efijery lehibe kokoa ary na amin'ireo mpampiasa Android aza. Ny sisa ataonao dia miandry ary jereo raha manadio bug ny programmer mihatsara ity rafitra fanahafana tsara ho an'ny lalao Super Nintendo ity.
Efa nanandrana ve ianao? Inona ny hevitrao?
Fanazavana fanampiny - Nintendo dia manamafy fa tsy hitondra ny lalao any amin'ny iOS izy, fa ho avy Apps
Loharano - WebNES
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ahoana ny fomba filalaovana ny anaram-boninahitra Nintendo amin'ny iPhone Safari nefa tsy misy ny Jailbreak
Mdsone dia hoy izy:
Aiza no ahafahako misintona romotra mivantana avy amin'ny iphone ao amin'ny Dropbox?
Mamaly an'i Mdsone
Tsy mahazo super mario bros aho, lalao hafa ihany ary rehefa mampifandray ny kaonty dropbox aho dia misafidy iray amin'ireo sariko ary tsy afaka mifidy azy ireo
IPhone 5c dia hoy izy:
Inona ny fandaniam-potoana amin'izao fotoana izao sy ny emulateur izay ampiasaina amin'ny iPhone nefa tsy mila mandeha amin'ny tranokala ary manao teatra be dia be "satria tiako" dia ny niantsoako an'io xd
Valio amin'ny iPhone5C
mosky1978 dia hoy izy:
Salama, tsy mety amiko io. Rehefa mitarika ahy mankany amin'ny Dropbox avy amin'ny safari izy dia tsy afaka misafidy ireo rakitra aho.
Mamaly an'i mosky1978
Alex Ruiz dia hoy izy:
Mety ho tsy fahombiazan'ny tranonkala io, omaly niasa tsara tamin'ny fotoana namoahana ilay lahatsoratra.
Valiny tamin'i Alex Ruiz